In Valverde uu la mid yahay Ramos, saameynta layaabka leh uu Coronavirus ku yeeshay Spain & dhowr arrimood kale uu ka hadlay Diego Forlán – Gool FM
Dajiye April 7, 2020
(Madrid) 07 Abril 2020. Xiddigii hore kooxaha Manchester United iyo Atletico Madrid ee Diego Forlán ayaa ammaan ugu qubeeyay laacibka khadka dhexe Real Madrid isla markaana ay isku wadanka yihiin ee Federico Valverde.
Diego Forlán ayaa wareysi uu ku bixiyay Radio “Marca” ee dalka Spain wuxuu kaga hadlay dhowr arimood muhiim ah, waxaana uu si gaar ah kaga hadlay saameynta layaabka leh uu dalka Spain ku yeeshay faafaha Coronavirus.
Xiddigii hore kooxaha Manchester United iyo Atletico Madrid ee Diego Forlán ayaa yiri:
“Waxaan la yaabay inta ay la egtahay faafitaanka Coronavirus ee dalka Spain, tirada dadka uu ku dhacay iyo dhimashada, iyo xaqiiqda ah in sahay badan aan la helin, maadaama saaxiibo iyo dad aad iigu dhow ay halkaas joogaan.”
“Champions League? Waxaan u maleynayaa inay haboon tahay in la dhameystiro, waxyaabo badan waa inay isku dheelitirnaadaan, maadaama xilli ciyaareedka soo socda uu jiri doono cadaadis, waxaa la ciyaari doono xitaa maalmaha fasaxa ah.”
“Dhamaanteen waxaa na saameeyay cudurkan, haddii ciyaaraha ay soo laabtaan sida ugu dhaqsaha badan ee suurtagalka ah, sida kaliya ee lagu dhameystiri karo xilli ciyaareedka waa inaan kansalno fasaxyada.”
Intaas kaddib Diego Forlán ayaa wuxuu u soo jeestay inuu ammaano xiddiga ay isku wadanka ka soo wada jeedaan ee Federico Valverde, wuxuuna yiri:
“Waxa uu leeyahay awood uu ku sii wato horumarkiisa, waana nin xirfadle ah oo shaqsiyad wanaagsan, mana layaabani waxa uu sameynayo, wuxuu helayaa kalsooni, qaan gaadhnimo iyo qibrad, waxayna ku raaxeysanayaan taageerayaasha Real Madrid sanado badan”.
“Waxaan halis ugu jiraa inaan iraahdo Valverde wuxuu ku jiri doonaa qadka dhexe, sida Sergio Ramos uu daafaca ugu jiro.”